Yakachipa SNCB Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba | Chengetedza Chitima
SNCB inopa njanji mabasa mukati meBelgium uye neEuropean. Tiketi chaipo, unogona kushanyira zvese zvakanakisa nzvimbo dzekuzorora muEurope. Nemhando dzakasiyana dzematikiti uye makadhi kunyoreswa, SNCB inopa kune zvese zvinodikanwa.
Mutengo we SNCB chitima matikiti inomuka sezvo zuva rekufamba rinoswedera. Unogona kuzvichengetera imwe mari nekubhuka yako SNCB matikiti ezvitima kure nekukwanisika kubva pazuva rekuenda. SNCB chitima matikiti anowanikwa kare kare 3 kuti 6 mwedzi pamberi pekubva muchitima. Kugadzirira kwekutanga kunovimbisa kuti iwe unowana yakanyanya-isingadhuri SNCB chitima matikiti. Ivo zvakare vakadzikira muhuwandu, saka kukurumidza iwe kuodha, zvakachipa kwauri. Kuchengetedza mari paSNCB chitima matikiti, tenga matikiti ako ASAP.
SNCB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye nemakwikwi mashoma, ivo parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muBelgium. SNCB inokwanisa kumisikidza zvirango zvetiketi senge iyo yavanayo inorambidza kuchinjanisa tikiti kana kudzorera kunze kwekunge iri bhizinesi reti tikiti. Kunyangwe paine mamwe mawebhusaiti eforum kwaunogona kutengesa matikiti ako echipiri ruoko kuvanhu, SNCB haibvumire kutengeswa kwetikiti-kechipiri. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
Sevha Chitima chine chikuru, zvakanakisa, uye zvakachipa zvinodhura matikiti ezvitima muEurope. Hukama hwedu nevazhinji vanoita njanji, masitiketi echitima, uye ruzivo rwedu rwehunyanzvi algorithms dzinopa Sevha A Chitima kuwana kune yakachipa pashiri yechitima matikiti. Isu hatisi kungopa zvakachipa zvitima zvechitima zveSNCB chete; isu tinopa zvakafanana kune dzimwe nzira dzeSNCB uye tinozvirumbidza pabasa rakanakisa revatengi mumusika wezvitima.
4) Zvitima zvinowedzera eco-zvine hushamwari kana uchienzanisa zvitima nendege, zvitima zvaibuda pamusoro. Ndege dzinosvibisa mhepo nemhepo yakadzika kwazvo. Zvitima mukuenzanisa zvinopa zvakawanda kusvibiswa kwekabhoni kushoma pane ndege.
Iwe unogona kuziva mune chaiyo-nguva pane yedu peji rembudzi pa Chengetedza Chitima iyo SNCB Chitima nguva, Ingo nyora munzvimbo yako ikozvino uye kwaunoda kuenda, uye isu tinokuratidza ruzivo.
SNCB zvitima zvinobva kuGhent kubva ku Ghent Mutsvene Pieters chiteshi, rinova ndiro guta rechitatu pakukura muBelgium uye rakakura muFlanders.
Liege, Liege Guillemins ndiyo SNCB yepakati chiteshi chechitima. saka, Liege chiteshi chechitima chinobatanidza Belgium nenyika dzakavakidzana, kuchiita chimwe chezviteshi zvechitima zvakabatikana muWallonia. Uyezve, kana uri kuronga kuenda kuGerman, Furanzi, Rukuzemubhogu, kana iyo Netherlands kubva kuBelgium, zviri nani kuchengetera yako SNCB chitima matikiti zvisati zvaitika.
kushandiswa (Brugge – Iri zita reguta mune mumwe mutauro unozivikanwa) chiteshi chechitima ndechimwe chakabatikana SNCB chiteshi chechitima muFlanders. Semuyenzaniso, kubva kuBruges, unogona kuraira yako tikiti tikiti kune mamwe dzakakurumbira dzakasiyana muBelgium: rinonzi Ghent, Antwerp, uye Brussels mune isingasviki awa. Chiteshi chechitima cheBruges chiri pa 20 maminetsi uchifamba chinhambwe kubva ku pakati peguta, uye yakanaka Guta Rekare Markt square.
iwe kugona chengetedza munhu ndinozivapa kufanoita pamusha SNCB nezvitima. iwe chido tora wega chigaro mushure mekugadzirisa, asi izvi hazvisi zvekufanirwa.
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, iwe ikozvino unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve SNCB yako zvitima uye vakagadzirira kutenga yako SNCB chitima tikiti pa Chengetedza Chitima.